Fu’ad Shonqole: Ragga naga soo horjeeda haween kuma xirmaan | KEYDMEDIA ONLINE
Fu’ad Shonqole: Ragga naga soo horjeeda haween kuma xirmaan
JABUUTI(KEYDMEDIA) Fu’aad Shonqole oo ka tirsan saraakiisha kooxda Shabaab ayaa hadal uu ka jeediyay masaajidka Nasrudiin ee magaalada Muqdisho waxa uu ku sheegay in aragti ahaan uu aaminsanyahay in ragga ka soo horjeeda afkaarta Shabaab ee ka tirsan dowlada aanay ku xirmin Haween.
“Xasaaskooda waxa ay ka furmeen markii ay ku biireen dowlada, kuwa cusubna ma doonan karaan oo kumaba xirmaan waayo waa dad ka baxay Diinta Islaamka” sidaa waxaa yiri Shonqole oo la hadlayay dhalinyaro aan wax badan diinta ka aqoon oo ku sugneed masaajidka Nasrudiin ee degmada H.wadaag.
Waxaa kaloo uu sheegay Shonqole in ay xukun ahaan la mid yihiin dadka aan tirsaneen dowlada ee la macaamiila ama taageersan dowlada, isagoona ku lifaaqay oraahdiisa hadal uu ula jeeday warbaahinta dhaliisha shabaabka oo uu sheegay in dadka ka shaqeeya ay la xukun yihiin ku tirsanayaasha dowlada.
Shonqole oo ah nin gadgadoon badan ayaa bishii tagtay hadal uu ka jeediyay masaajidka Abuu-hureyra ee suuqa bakaaraha waxa uu uga codsaday dhalinyarada shabaabka in ay joojiyaan ku gaalnima xukminta ummadda islaamka ah, waxaana iminka muuqaneysaa in dardaarankiisii uu daryeeli waayay.
Dadka falanqeeya arimaha shabaabka ayaa waxa ay ku fasireen hadalkan inuu yahay mid ay ku qasbeen ajaanibta shabaabka hogaamisa, kadib markii isaga iyo Godane ay eraya kulul isku weedaarsadeen warbaahinta, waxaana la rumeysanyahay in ajaanibta ay ku qasbeen Shonqole in uusan ka leexan wadiiqada Mab’da shabaabka isla markaana uu iska hilmaamo wacdiga iyo waanada dhalinyarada.